Inkqubo yokuziqengqa okuzenzekelayo kwenkqubo yokuvelisa inwebu yefayibha (kunye nefomula yefektri) -MBR Ifilimu-Shenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd
Zenzekelayo uqengqa inkqubo uf izixhobo izixhobo ifayibha inwebu lemveliso (kunye ifomula mveliso)
Izixhobo eziveliswe yinkampani yethu zihambele phambili MBR inwebu intambo umgca wemveliso oluzenzekelayo, ezinokuvelisa iintlobo zeentlobo inwebu inwebu, inezibonelelo ubungakanani amancinci, ixabiso eliphantsi imveliso, ukusebenza elula kunye nokugcinwa, njl
Izixhobo zezi Zenziwe ezikumgangatho ophezulu insimbi engenasici, kunye nenkqubo yokuvelisa iphucukile.
Sineseti epheleleyo yenkqubo yemveliso yenwebu evuthiweyo, esetyenziswa ngokudibeneyo nezixhobo zethu. Umgangatho weemveliso ezivelisiweyo zizinzile kwaye zithembekile, kwaye imveliso iphezulu, enokunika umdlalo opheleleyo kwizona zibonelelo zibalaseleyo zezixhobo.
Ilula ——Kulula ukusebenza
Iimpawu ——Ulwakhiwo olunengqiqo, ubumbano kunye nendawo encinci yomgangatho
Ukusebenza——Imveliso ephezulu yezixhobo zokuvelisa, iiyure eziyi-8 zinokufikelela kwiimitha zesikwere ezingama-400-800
Ukurisayikilisha nokusetyenziswa kwakhona- Ukufumaneka kokusetyenziswa kwakhona kwamanzi ngokuthe ngqo nangokungathanga ngqo
Ubukhulu L × W × H (m) I-Qty
Itanki ekhutshiweyo 0.75 × 0.75 × 2.10 1
2 Isitya soxinzelelo 1.45 × 0.80 × 2.20 1 I-304 insimbi engenasici
3 Inwebu yocingo isinki enzulu 1.35 × 0.66 × 2.50 1 I-304 insimbi engenasici
4 Itanki lokupholisa itanki 3.20 × 0.48 × 0.79 1 I-304 insimbi engenasici
5 Ikhonsoli (enkulu) 2.15 × 0.55 × 1.74 1 I-304 insimbi engenasici
6 Ikhonsoli (encinci) 1.95 × 0.55 × 1.89 1 I-304 insimbi engenasici
7 Isakhelo sokujikeleza 1.10 × 0.70 × 2.10 1 I-304 insimbi engenasici
8 Ucingo Umatshini liwe 1.30 × 1.20 × 1.35 1 I-304 insimbi engenasici
9 Inkqubo yekhabhinethi yolawulo 0.56 × 0.34 × 1.70 1 I-304 insimbi engenasici
11 Ubungakanani obupheleleyo bokulingana 0.76 × 3.10 × 2.60 1 I-304 insimbi engenasici
Imveliso yePVDF yefomathi eluhlaza (engabandakanyi izinto)
Ungenziwa ngokusesikweni kwisicelo sakho
Indawo yeFootprint: 1-40m²;
Ukusetyenziswa kwamandla kwe-2KW (ngaphandle kwetanki yokufudumeza ioyile esembindini kunye nombhobho);
3.Isekelwe kwi-1 kwezi-8 zee-spinnerets;
4.The ngentla lixabiso ex-mveliso;
Iindleko zabasebenzi kufakelo lwesiza kunye nesikhokelo asifakwanga, kwaye umthengi kufuneka athwale zonke iindleko zohambo kwisikhokelo sendawo;
6.Imveliso yewaranti yonyaka omnye;
7.Production ixesha phambili: iintsuku ezingama-30 zomsebenzi;
8. Ikowuteshini isebenza ngeentsuku ezingama-30.